UMIKE WILL UYENZILE: INTLAWULELO YOKUHLOLWA KWEALBHAMU YESI-2 - IINDABA
I-albhamu yakhe yokuqala-kunye nokulandelelana kwemixepape ka-2014- ziyinxalenye ezilinganayo zokubamba imali, umboniso wee-roster, kunye ne-CV. Kodwa ngenxa yokuba indalo kaMike WiLL, ayinakukunceda kodwa kuyonwabisa.
Dlala iTrek Ekunyukeni -UMike WiLL UyenzileUkuhamba SoundCloud
Njengokuba iMetro Boomin yaba ngumsebenzi wokugibeza, uMike WiLL Made-It, owathiywa njalo nguGucci Mane ngexesha lokubaleka kwe-mixtape, wandise irekhodi lakhe ngeepivots ezinkulu- Uhambo lwe-zany psychedelic kwaye Ukuhambahamba kwe-chic pop . Ukusukela oko wazibhengeza kwisifuba sika Meek Mill ebetha u-Tupac Back, uvelise yonke into esuka kwi-ballads ye-spacey space (Ukujika kwexesha elizayo kwiLights), ukukhulula iingoma zeklabhu (Bandz a Make Her Dance), i-R & B massager (ICiara's Body Party), ii-pop banger (Miley Cyrus 'We Can't Stop), diva tribute (Beyonce's Formation), nkqu ukutya kweentengiso , kwindlela yakhe yokuba ngomnye weengoma ezirekhodiweyo zerap. Xa iWiLL yabelana ngezixhobo ezivela kuye 2016 discography , yayiyinto eguqukayo ebabazekayo, imibala enemibala yemigibe ye-pop ishiyiwe isitshixo amaxesha ngempazamo. Zininzi kakhulu iijam alibale ezinye. Embindini, wafumana amanqaku akhe okuqala ashushu e-Hot 100 ngokuvelisa ubushushu bentsholongwane iBeatles ezimnyama zikaRae Sremmurd, isenzo sobume be-EarDrummers yakhe. Uloyiso lwalubonakala luqinisekisa umbono wakhe: kungekuphela nje ngokucinga ngaphandle ibhokisi ye-rap ihlawule izabelo ezinkulu, ibiyenza loo nto kubazobi ebebakhulisa, abo bonke bebegxekwa ngabagcini-masango abadala be-rap. Inyathelo elilandelayo elinengqiqo kukuhlanganisa ukuqokelela ezi mpumelelo ziqokelelweyo. Intlawulelo 2 , Ialbham yokuqala yeWiLL kunye nokulandelelana kwemixtape ka-2014, ziyinxalenye elinganayo yokubamba imali, umboniso woluhlu, kunye ne-bulletin ye-CV. Kodwa ngenxa yokuba indalo kaMike WiLL, ayinakukunceda kodwa kuyonwabisa.
Intlawulelo 2 ayifani ngokwahlukileyo kunangaphambili. eneneni, 13 iindwendwe zibuya kuhambo lokuqala. Amagama amakhulu abonisa i-flip ekhawulezayo kuluhlu lokunxibelelana kukaMike WiLL: URihanna, uKendrick Lamar, uKamva, uPharrell, uLil Wayne, uBig Sean, uMigos, uYG, kunye nokunye. Obunye ubuso buyinxalenye yonyuselo lwee-EarDrummers: URae Sremmurd, u-Eearz, uAndrea, uFortune kunye nabavelisi uPluss, uMthombo kunye neMarz. Nangona uninzi luphinda iindwendwe, icwecwe licekeceke ukuziva ngathi libuyele kwakhona kwaye akukho zitshintshi zibonakalayo kumgangatho. Iphawulwe ngobuninzi bemigqomo ye-boggy kaMike WiLL, eyabetha nge-slosh ngokuchasene ne-thud. Phezulu kuluhlu lweemveliso zakhe ezigqwesileyo, abenzi betshitshisi banamhlanje nangomso bayangqubana.
Ixesha elingaphezulu, abavelisi abaphumeleleyo njengoMike WiLL bafumana i-clout eyoneleyo yokufumana imali-kwizinto ezilungileyo eziyimfuneko ukuqokelela ii-off-offs kunye neeseshoni ezongezelelweyo ezenza ii-albhamu ezinje ngezi. Baziva ngathi ukwaliwa kugcinwe kwiimfumba zokulahla ezikhutshiweyo. Kodwa uninzi lwentsebenzo kwi Intlawulelo 2 zinamandla kangangokuba iingoma aziziva ngathi ziiblip kwiikhathalogu ezinkulu zeMCs ezisebenza rhoqo ezinje ngeKamva, iGucci Mane, kunye neThug encinci. Kwi-Pint egqibeleleyo, i-SremmLife duo yorhwebo raps kunye ne-bunkmates ezingalindelekanga uGucci kunye noKendrick Lamar, kwaye i-chemistry yinto emangalisayo. Ixesha elizayo liyaqhubeka nefom yakhe yamvanje kwiRazzle Dazzle. Zonke iivesi ezintsha zikaWayne zivakalelwa ngathi ziindlobongela kuBirdman kwaye ukholo aluhlukanga, ngakumbi xa ujonga i-Young Money signee HoodyBaby tag ecaleni. Ngo-W Y O (Oko ukukhoyo), u-Thug omncinci uqhubeka nokulingwa kwakhe ngokuhamba okutsha, ethetha nge vesi yokuqala ngaphambi kokuqhekeza owesibini kuqhume. Ukuba kukho nantoni na, ezi ngoma zivakalelwa nje ngokungathi ziziphinda-phinda ngokuqhekeka kutsha nje.
Njengamagcisa kwinqanaba lamandla abo abonisa amagqabantshintshi okwenza ukuba babaluleke, isivuno se-MCs esikhethwe nguMike WiLL kubasebenzi bakhe bafumana ukusayina kwabo. I-Sremmurd's Swae Lee, ngokucacileyo eyona asethi inkulu kwiqela likaMike WiLL, inika incasa ye-albhamu eyedwa ebekade ehlekisa ngayo kwiiBhari zeSepha, ukuhamba ngenqanawa kwindlela yakhe eqhelekileyo yoopopayi. UAndrea ulandela uBurnin ngokubhabha ngakumbi kunye nokuhamba ngokutyibilika. Njengeqela, u-Lee kunye no-Slim Jxmmi benza uninzi lokuhlangana kwakhona ne-Chief Keef, nganye ingafani kodwa iyangqinelana ne-rap ye-Auto-Tune wave. Kodwa ngu-Eearz owenza olona phawu lubalaseleyo ngeemvakalelo ezingatshixwanga, esika amaza eebhasi ezigqwethekileyo ngokudibanisa ukuhanjiswa konyamezelo kunye nokungahambi ngxi.
Ngaphandle kokubulawa kokuma, Intlawulelo 2 ayisoloko ifumana uninzi lweendwendwe zayo. I-ode kaLil Yachty eya kwi-Baywatcher, eHasselhoff, uyaphambuka kwiziyolo ezimnandi ezamenza waduma kakhulu (kwaye wadlala ngamandla akhe), wakhetha indawo ye-bar ejongene ngqo. Ingxaki kunye neenzame zeqela lethegi yeqela lengxaki, uThixo omkhulu, uyalahleka ekutshintsheni-akukho mkhulu okanye uhlonela uThixo. Kwaye uFortune akabonisi isithembiso esifanayo njengabanye asebenza nabo kwi-EarDrummer kwi-Oh Hi Hater (Hiatus). Imikhwa yakhe ye-mushy iginywa yi-WiLL's slimy synth gelatin. Ezi mpazamo zincinci kunye neendinyana ezimbalwa ezilibalekileyo ecaleni, uMike WiLL Made-It Intlawulelo 2 yintsomi eyenza kanye le nto ibizimisele ukuyenza: gcwalisa ingubo yakhe ngeendebe ezimenyezelayo zempumelelo yamva nje ngelixa usenza indawo entsha.
Ubufazi Kangakanani Ubuso Bam? Fumana ngale Quiz!
Imibuzo YesiNgesi: Yeyiphi iDialect yesiNgesi endiyithethayo?
Bukela iVeki yeVeki eNtsha yeNgoma eNtsha ndiyintombi enyulu kutata waseMelika
Wazi ntoni ngeHagoromo Otsutsuki?
I-MCAS: UVavanyo lokuSebenza lwe-ELA lweBakala lesi-7
Ukucacisa i-MCQ Quiz ngeempendulo
nkosi emoyeni namhlanje ebusuku
lil wayne carter 5 ingoma
Umjelo weFrank orenji wolwandle
Ukucoca umkhethe omkhulu
uphononongo lweentliziyo ezingcwele